डा. उपेन्द्र देवकोटाले लिए विदा, देशले बेहोर्नु पर्यो अतुलनीय क्षेती - Jerung Films
डा. उपेन्द्र देवकोटाले लिए विदा, देशले बेहोर्नु पर्यो अतुलनीय क्षेती
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 19 Jun 2018
जेरुङ फिल्मस् संवाददाता,५,असार–काठमाडौँ । मानव जिन्दगी पनि अचम्मको छ । कोही चाहेर यो धर्तीबाट विदा लिनु पर्ने छ ,भने कोही नचाहेर पनि विदा लिनुपर्ने हुन्छ । हुन त एउटा भनार्इं छ, राम्रो चिज भगवानको आँखामा पनि छिटो पर्छ रे । हजारौँ बिरामीलाई पुनर्जन्म दिएका एक चिकित्सकले क्यान्सरसँगको ६ महिना लामो लडाइँपछि मृत्युवरण गरे ।
पुष्पगुच्छाले झपक्क सजाइएको टेबल । त्यसमाथि ढाका टोपी पहिरिएर शान्त चिर निद्रामा निदाइरहेका एशियाकै अब्बल स्नायु चिकित्सक विशेषज्ञ डा। देवकोटा । नेपाल मात्र होइन दक्षिण एसियामै ख्याति कमाएका डा।उपेन्द्र देवकाटाले सोमबार अन्तिम सास फेरे ।
६ महिनाअघि रोग देखिएपछि परिवारले उनलाई अब्बल बनाएको देश बेलायत पुर्याएको थियो । तर, जीवनका अन्तिम दिनहरु नजिकिएको पूर्व जानकारी पाइसकेका डा।देवकोटा अन्तिम सास स्वेदशकै माटोमा फेर्न चाहान्थे । गत वैशाख १५ गते पुनः स्वदेश ल्याइएपछि उनलाई आफ्नै अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको थियो ।
उनको जीवन फर्काउन दिनरात खटिएका उनका शिक्षार्थी न्यूरो अस्पतालका चिकित्सक डा।मयुस मुनंकर्मीले डा।देवकोटा आफैँ बिरामी र आफैँ चिकित्सकको भूमिका निर्वाह गरेको सम्झिन्छन् ।
‘बिरामीप्रतिको लगाव, आफ्ना अग्रज, सहपाठी, जुनियर चिकित्सकलाई सधैँ माया, सम्मान गर्ने कुरा हामीले उहाँबाट सिक्यौँ,’ डा। मुनंकर्मी भन्छन् ।
आफ्ना बालसखाको अन्तिम बिदाइ गर्नुपर्ने दिन यति छिट्टै आउँला भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईले कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।
डा।देवकोटाले ३५ वर्ष अगाडि नेपालमा नभएको दुर्लभ र जटिल मानिएको स्नायु सेवा शुरु गरेका हुन् ।
डा। मुडवरीलाई डा।देवकोटाले परिवारको सदस्य बनाएका थिए । बिरामीप्रतिको इमान्दारिता र समग्र स्वास्थ्य सेवामा चिन्ता गर्ने स्वभाव कमैमात्र व्यक्तिमा हुन्छ भन्ने डा।मुडवरीलाई लाग्छ ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला र डा।देवकोटा पनि मन्त्री थिए । प्रदेश प्रमुख कोइरालाले देवकोटाका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा उनको शोक आँशु बनी बगिरहेको थियो ।
आँखाको उपचार सेवामा समर्पित डा।सन्दीप रुइत देवकोटा अनुशासित पेशाका उत्कृष्ट व्यक्ति भएको स्मरण गर्छन् । ‘नेपाली हुँ, नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँमा सोच र भावना थियो,’ उनले भने ।
डा।देवकोटाको हिजो सोमबार बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा साँझ ५ः३५ मा निधन भएको हो । आज बिहान ८ः०० देखि १३ः०० बजेसम्म श्रद्धाञ्जलिका लागि अस्पतालमा पार्थिव शरीर राखिएको थियो । मृत्युको खबर सुनेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल पुगी परिवारजनसँग भेट गर्दै समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेत्री पम्फा भुसाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर राणा, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ भगवान कोइराला, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन बिएन गंगोल, न्यूरो सर्जन वसन्त पन्त, डा।मोहनराज शर्मा, डा।गोविन्द केसी र प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलगायतले देवकोटाप्रति श्रद्धान्जलि प्रकट गरेका थिए ।
डा।देवकोटाका श्रीमती र तीन छोरी रहेका छन् । डा।देवकोटाको आजै पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अत्येष्टि गरिँदैछ ।